Jiya KC - Actress
Topic: Jiya KC - Actress
Author Topic: Jiya KC - Actress (Read 37530 times)
Re: Jiya KC - Actress
« Reply #20 on: July 07, 2015, 12:46:28 PM »
अहिलेसम्म कुनैपनि पुरुषसँग सुतेकी छैन – नायीका जिया केसी
चलचित्र ‘हो यही माया हो’बाट नेपाली रजतपटमा प्रवेश गरेकी नायिका जिया के.सी. अभिनित केही चलचित्र रिलीजमा त आए तर कुनैपनि चलचित्रले व्यवसायीक रुपमा सफल त हुन सकेन, न त दर्शकले उनी अभिनीत चलचित्र मन पराईदिए । उनी अभिनित चलचित्र ‘एटिएम’ केही महिनाअघि रिलिजमा आउनासाथ बन्द गर्न सञ्चार मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएपछि त्यत्तिकै सेलायो । तर कुनैपनि चलचित्र सफल नभएपनि उनी भने विभीन्न तवरवाट चर्चामा छिन् । अहिलेसम्म आधा दर्जन सिनेमामा अभिनय गरिसकेकी नायिका केसीसँग रंगपोष्ट डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अशं ।
चलचित्र एटिएम रिलीजमा आउनासाथ वन्द भयो, चलचित्रमा तपाई निकै नै उत्तेजित र अश्लील देखिनुभएको होनी त, वास्तविक जीवनकी जिया यस्तै अश्लील र सेक्सी छ भन्ने दर्शकहरूले सोचे भने के गर्नुहुन्छ ?
– मलाई दर्शकहरूले यस्तो सोच्दै सोच्नुहुन्न । ‘एटिएम’मा म उत्तेजित छु तर अश्लील छैन । चलचित्र पनि अश्लील हैन । एकपटक सबैले चलचित्र हेर्नुस् र भन्नुस् । बाहिर आएका हल्लाहरूलाई ‘एटिएम’ले राम्रै चर्चा बटुल्नेछ म र ‘एटिएम’ युनिट पनि विश्वस्त थियौ ।
हिरोइन बन्ने सपना कहिले पलाएको हो ?
– मैले जहिले हिरोर फिल्मको बारेमा बुझेकी थिएँ, त्यहिलेबाट नै हो भन्न चाहन्छु । बोली फुट्दादेखि नै नानी तँ भविष्यमा के बन्ने हो भन्दा मैले भन्ने गर्थें रे, – नायिका ।
नेपालका नायक–नायिका को को मन पर्छन् ?
अहिले भरखरै झरना थापा र रेखा थापा नै मन पर्छ, पहिले पहिले त मलाई जल साह र करिशमा दिदी नै मन पथ्र्यो । नायकहरू लगभग सबै नै मन पर्छ, ठ्याक्कै यही हो भन्दिन ।
वास्तविक जीवनमा जिया कस्तो महिला हो ?
– म घरकी कान्छी छोरी हुँ, ‘एटिएम’मा जस्तो सोच्नुभएको त हैन नि ।हाहाहा ।वास्तविक जीवनमा भरखरै उदाउँदै गरेकी नायिका, जो भविष्यमा सफल नायिका बन्ने लक्ष्य लिए® झापाबाट काठमाडौँ छिरेकी हुँ ।
मायाको परिभाषा थाहा छ ?
– यसमा सबैको आ–आफ्नो भनाइ हुन सक्छ । मेरो विचारमा माया भनेको एउटा विश्वास हो जस्तो लाग्छ । कसैसँग विश्वास हारियो वा जितियो त्यसमा माया भर पर्छ।
मान्छेहरू धेरैले मायामा धोका पाएका गीत सुन्ने र गाउने गर्छन् नि किन होला ?
– कसरी भन्ने, यो दुनियाँमा जतिले माया गर्छन् धेरै मायामा धोका खाएको कारण यस्तो भएको हो कि । तर म भने मायामा परेकी छैन मलाई जस्तो खालका गीत पनि राम्रै लाग्छ ।
– सेक्स भनेको ईश्वरको वरदान हो । अमूल्य चिज हो। सेक्सविना यो संसार अपुरो र अधुरो हुनछ ।
मान्छेहरू किन सेक्सलाई धेरै महत्व दिन्छन् ?
– मैले भनिसकें नि, जुनविना संसार असम्भव छ । अर्को कुरा हामीले विवाह नगरि हुदैन । विवाह गर्नुपर्ने कारणले पनि यो कुरा निकै सामान्यीकरण हुदै गएको हो की ?
कुनै पुरुषसँग सँगै सुत्नुभएको छ ?
– अहिलेसम्म कुनै पनि पुरुषसँग सँगै सुतेकी छैन । रियल्ली भन्नेहो भने म भर्जिन हुँ। हाहाहा…लामो हासो ।
बिहेअघिको सेक्स कस्तो लाग्छ ?
– सहमतिमा हुन्छ भने केही फरक पर्दैन।
ब्लु फिल्म हेर्नुभएको छ ?
– अहिलेको जमानामा पनि ब्लु फिल्म हेरेकी छैन भन्ने हो भने तपाईंले नपत्याउन सक्नुहुन्छ होला।
तपाईंलाई कसैले यस्तो फिल्ममा अफर ग¥यो भने के गर्नुहुन्छ?
– त्यस्ता अफरत आइहाल्छ नि। तर आफूमा भर पर्ने कुरा हो । मैले के गर्ने भन्ने कुरा त मेरो व्क्तिगत कुरा हो । मैले के गर्थें भन्ने कुरा मलाई नै थाहा छ ।
अनि, तपाईंलाई के के गर्न बढी मन पर्छ ?
– पहिलो कुरा त चलचित्र क्षेत्र नै भयो, म अभिनयमा निकै रुची भएकी मान्छे हुँ । त्यसबाहेक पत्रपत्रिका पढ्न, विभिन्न रमाइला रमाइला ठाउँ घुम्न पनि मज्जा आउँछ ।
मनपर्ने खाना के हो ?
– दाल, भात, तरकारी, अचार नै हो । विर्तामोडको चटपट् पनि साह्रै मन पर्छ ।
नेपालको घुम्न लायक ठाउँमध्ये सबैभन्दा मनपर्ने ठाउँ ?
- झापाको चारपाने, जति घुम्यो त्यति मज्जा।
आफ्नो अनुहार कस्तो लाग्छ ?
– वास्तवमा भन्ने हो भने जिया एकदमै राम्री छु, अनुहारको त कुरानै नगरौ ।
नेपाल किन पछि परेको हो जस्तो लाग्छ ?
– नेताहरूकै कारण हो, सधंै कुर्चीको खेल।
– मलाई फुर्सदको समयमा पुस्तक पढ्न मन पर्छ, अरु वेला त समय नै हँुदैन।
भर्खरै भगवान् प्रकट भएर कुनै चिज माग्न भने के माग्नुहुन्छ ?
– म अहिले पोखरामा छु, भगवान् उपस्थित भए र केही मागेर पुग्ने भए सलमान खानसँग डेटिङ जान्थें होला। अनि तालबाराही मन्दिरसँगै फेवातालमा घण्टौँ समय डुंगामा सरर गर्थे ।
« Reply #21 on: August 16, 2015, 02:43:12 AM »
« Reply #22 on: October 01, 2015, 02:59:52 PM »
झण्डै एक दर्जन सिनेमामा काम गरिसकेपनि एउटै रिलिज भएको छैन, नायिका जिया केसीको । 'एटीएम'लाई रोक लगाइदिएपछि झड्का महसुस गरिरहेकी जिया नायक भुवन केसीसँगको सम्बन्धले चर्चामा छिन् । झापाको चारपानेमा जन्मिएकी उनी आफूलाई प्लेब्वाई मन पर्ने निर्धक्क बताउँछिन् । फिल्म नेपालसँगको कुराकानीमा उनले बारम्बार आफूलाई भुवन केसी मन पर्ने दोहोर्‍याइरहिन् ।
भुवन केसी तपाइँलाई साँच्चै मन पर्छ ?
हो, आई लभ हिम । -हो, उहाँलाई म साँच्चै माया गर्छु ।) तर जसरी बाहिर हल्ला फैलिरहेछ त्यो अर्थमा होइन । म उहाँको फ्यान हुँ । फ्यानको रुपमा कसैलाई माया गर्न पाइँदैन र ?
भुवन केसीको के कुरालो तपाइँ भुतुक्क हुनुभएको ?
एकदमै स्मार्ट लाग्छ । उहाँको जस्तो गेटअप सायद नेपाली चलचित्रमा अरु कसैको पनि छैन ।
उहाँसँग भेट भएको कति समय भयो ?
एक वर्ष पुग्न लाग्यो । 'एटीएम'को एउटा गीतको डान्स गर्दा उहाँ त्यहीं आउनुभएको थियो । भुवन केसी सिनेमाका लागि हिरोइन खोज्न आउनुभएको थियो ।
सुटिङ स्थलमै नायिका खोज्दै आएको कुरा कसरी पत्याउने ?
होइन मेरो काम पनि हेर्न खोज्नुभएको होला । किनभने मेरो डान्स देखेर उहाँले प्रशंसा गर्नुभएको थियो ।
तपाइँहरुको सम्बन्धचाहिं कसरी नजिकियो ?
त्यसको दुई महिनापछि उहाँसँग दरबारमार्गको नाङ्लो क्याफेमा अचानक भेट भयो । त्यसपछि चाहिं उहाँसँग राम्रै गफगाफ हुन थाल्यो । उहाँको घरमा पनि जान थालें । हामी केही दिनअघि मात्रै चावहिलमा एउटा मोबाइल पसलको उद्घाटन गर्न सँगै गएका थियौं । लगत्तै आरधना क्याफेमा अक्कल दाईको छोरीको पास्नीमा पनि सँगै थियौं । सायद यही कारण हामीबीच यस्तो काण्ड चलाएको हुनुपर्छ । तर उहाँलाई म जहिल्यै आदर गर्छु ।
यदि उहाँले विवाहको प्रस्ताव राख्नुभयो भने त खूब खुशी लाग्छ होला नि ?
मैले यो स्टेजसम्म साचेकी छैन । अलि सानै उमेर भएकोले हो कि ।
यस्तो कुरा फैलिएपछि उहाँसँग सम्पर्क भयो ?
छैन । मैले पनि गरेकी छैन । के भन्ने भन्ने भएर फोन गर्न पनि अफ्ठेरो लागिरहेछ । उहाँलाई देख्दैमा म त नर्भस भईहाल्छु । फोन गर्नुभयो भने पनि के कुरा गर्ने थाहा छैन ।
कुरा सुन्दा त लभ नै परेजस्तो छ ?
उहाँको मलाई धेरै माया लाग्छ । तर अफेयरको रुपमा होइन ।
भुवन त वैवाहिक जीवनमा असफल व्यक्ति हुन् । धोका होला जस्तो लाग्दैन ?
मलाई त वास्तवमा प्लेब्वाई नै मन पर्छ । केटी फेरिरहने उनीहरुको बानी ठीक लाग्छ ।
सायद म सोझी भएर होला ।
एकातिर प्लेब्वाई मन पर्छ अर्कोतिर आफूलाई सोझी ठान्ने । कसरी पत्याउने ?
मनमा लागेको कुरा भनेकी हुँ । मेरो बारेमा बाहिर जे कुरा फैलिन्छ त्यो कहिल्यै सत्य हुँदैन ।
तपाइँ आफू पनि प्ले गर्ल हो ?
बिल्कुल होइन । सोझी केटी हुँ । संघर्ष गरिरहेकी छु ।
१० वटा सिनेमा खेलेर संघर्ष गर्दा पनि स्थापित हुन नसकेपछि भुवनसँगको सम्बन्धले फाइदै पुग्ला नि ?
उहाँलाई मैले त्यो रुपमा लिएकी छैन । फेरि त्यति ठूलो कलाकारको नाम बेचेर खानुपर्ने अवस्था ममा आइसकेको छैन ।